Ivulekile futhi inethezekile, khona kanye phakathi kwedolobha! - I-Airbnb
Ivulekile futhi inethezekile, khona kanye phakathi kwedolobha!
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Teresa
Downtown Charleston, WV eduze St. Francis Hospital kanye Embassy Suites. IMakethe yaseCapitol EDUMILE KAKHULU, iTown Center Mall kanye neCivic Center iseduze kakhulu. I-Charleston Municipal Center iqhele ngamabhulokhi ama-4. Ngakho-ke uphakathi KWAKHO KONKE ongakwenza phakathi kwedolobha i-Charleston, okuhlanganisa izindawo zokudlela nokuzijabulisa, kodwa unendawo eningi yokusabalalisa noma ukuhlala isikhathi eside endaweni enethezekile nesikhala. Indawo ethule kodwa evelele! Okusanda kulungiswa!
I-condo yethu isanda kulungiswa kabusha ukusuka phezulu kuya phansi, ngakho ineflooring yamanje futhi ewubukhazikhazi kakhulu futhi iyaphela etholakala namuhla. Ifenisha entsha sha kanye nemihlobiso futhi, okwenza lesi sikhala sikhululeke futhi sihlanzeke. Omakhelwane banake ibhizinisi labo, futhi iyindawo enokuthula nethule, enendawo ekahle. I-Capitol Street iqhele ngamabhulokhi amabili nje, enempilo yasebusuku enhle kanye nomugqa wendawo yokudlela. I-Town Centre Mall iyabonakala, kanye nokuba seduze ne-Civic Centre kanye ne-Municipal Auditorium. I-Clay Center iqhele ngamabhulokhi ayisithupha, kanye ne-CAMC General Hospital.
4.94 · 136 okushiwo abanye
Indawo yakithi inesango ezinhlangothini ezingemuva ngakho-ke noma ubani ongena kuyo kufanele adlule endaweni enkulu. Isivakashi ngasinye sinikezwa ukhiye wesango laso legceke ukuze sikwazi ukusebenzisa leyo ndlela yokuphuma uma sikhetha lapho siya enxanxatheleni yezitolo noma ezindaweni zokudlela eziseduze. Iningi labahlali bakule ndawo sebekhulile, abanye babo beyizakhamuzi zokuphila kwakho konke, ngakho ngeke banikhathaze, futhi silindele ukuthi nani nenze okufanayo.
Into eyodwa okufanele uyiqaphele, azikho izikebhe, ama-trailer, ama-camers, ama-pull-back kwanoma yiluphi uhlobo oluvunyelwe endaweni. Futhi uma unezimoto ezengeziwe, sicela ungazipaki otshanini. Kukhona indawo yokupaka eyengeziwe eduze kwepaki ngaphesheya komgwaqo ngaphansi komgwaqo ophakathi nendawo, oyabonakala.
Uma upaka imoto yakho endleleni yokungena hhayi egalaji, ukuze uthole ukuvikeleka okwengeziwe, sincoma ukuthi ukhiye imoto yakho ngesandla ngenkinobho yokukhiya umnyango wangaphakathi, esikhundleni sokukhiya ukhiye wakho wokude.
Ngihlala edolobheni eliseduze, ngakho uzongena uphinde uphume ngekhodi yekhiphedi.